5 echisimba mitambo yatinogona kuisa pane ingangoita chero Gnu / Linux kugovera | Linux Vakapindwa muropa
Pakutanga isu takataura nezvemitambo yatinogona kuisa pane yedu Gnu / Linux, tataurawo nezvemitambo uye zvinopihwa papuratifomu yeSteam, asi havazi ivo chete mitambo yemavhidhiyo yatinogona kuisa paGnu / Linux.
Nguva ino tiri kuzokuratidza rondedzero yemitambo yemavhidhiyo yakaberekerwa mapuratifomu eGnu / Linux uye asina kana shanje kumitambo yeWindows. Asi haizove medley yemhando asi asi iwo ese achave marongero emitambo, rudzi rwakagadzirisa nyika yemitambo yemavhidhiyo anopfuura makore makumi maviri apfuura uye ichiri chipenyu kwazvo.
3 Hondo yeWesnoth
6 Havasi vese varipo asi ivo vese varipo
Imwe yeanozivikanwa mutambo wezano iri pasina mubvunzo Microsoft's Age Of Empires. Mutambo wakavandudza rudzi uye ukaita mazana ezviuru zvevashandisi kutendeukira kumatanho emitambo. 0 aD akazvarwa aine pfungwa yekuve dombo reAge Of Empires, asi chokwadi ndechekuti chakapfuura. 0 aD mutambo unovandudzwa nguva zhinji uye kunyangwe isina mushandirapamwe, ine zvakawanda zvezviitiko zvitsva, kuvandudzwa kwemayuniti uye magirafu asina chekugodora chero mutambo wevhidhiyo wakaitirwa Windows. Iyo zvakare ine yepamhepo kana yevatambi vakawanda nzira iyo zvinotibvumidza kutamba muboka online. 0 aD inogona kuiswa kuburikidza neyepamutemo marekodhi eedu Gnu / Linux kugovera.
Mutambo FreeCiv ndeye yakavhurika sosi yemutambo iyo yakavakirwa paBudiriro. FreeCiv inoshanda nenzira imwechete uye idombo rakakura remutambo wezano. Mashandiro ayo akanaka kwazvo uye akatsiga, aine ese mashandiro emutambo wepakutanga kubva pazuva rekutanga.
FreeCiv inogona kuiswa pane chero kupi zvako kweGnu / Linux uye zvaita kuti vashanduki-based strategy vashandisi vave nemusoro wakanaka wekutamba nawo kubva pane zvavakagoverwa. FreeCiv inogona kuiswa kuburikidza neyepamutemo ekuparadzira zvinyorwa pamwe ne tinogona kuisa server yako plugin kuti tikwanise kutamba mutambo uyu kure.
Hondo yeWesnoth ndeyepakutanga Gnu / Linux zano vhidhiyo mutambo. Iri zita rakaberekerwa Gnu / Linux kunyangwe budiriro yaro yaita kuti riwane mamwe masisitimu anoshanda. Uyu mutambo ishanduko-based zano kunyangwe paine zvimwe zvekutanga zvekubata senge kusimudzira kana shanduko yevatambi nekutenda kune kwavo ruzivo. Hatizove nemapurazi kana zviwanikwa asi isu tichazoda hombe huwandu hwesarudzo yekurova uyu mutambo. Kufanana nemazita epamberi, Iyo Hondo yeWesnoth inogona kuiswa pane chero kugoverwa kweGnu / Linux kubva kumahofisi ayo epamutemo.
MegaGlest mutambo wakaenzana ne0 aD asi hwaro hwayo hausi Zera reMambo asi Warcraft. A) Hongu MegaGlest mutambo unobva paWarcraft III uye zano rayo mutambo mutambo. Iwo mavara anove echimanje manje saka zvinoita sekunge tiri kutarisana neWoW pachinzvimbo chayo chekare vhezheni.
Chinhu chakanaka pamusoro pemutambo uyu ndechekuti mukuwedzera pakupa akasiyana, Inowanikwa mune ese epamutemo marekodhi ezvekugovera, iyo inotibvumidza isu kuiisa pane chero kupi kweGnu / Linux kugovera. Uyu mutambo ini handisati ndaedza asi zviri pane yangu runyorwa rwemitambo iri kuuya.
VCMI hausi mutambo pachawo asi asi kuchinjwa kwemutambo Magamba Emasimba uye Mashiripiti III. Izvi zvinoreva kuti VCMI inogadzira chinongedzo chemukati memutambo uye inoshandisa yemahara mutambo injini.
Izvi ndizvo chaizvo zvinoitwa nemitambo yakawanda, asi mune ino kesi, kugona kutamba VCMI Tichada kuve neHeroes of Might uye Magic III disc kuti tishandise mifananidzo, mifananidzo uye manzwi. Kunyangwe isu tichigona kurodha pasi uye nekuisa uyu mutambo kubva pane chero kugoverwa, tinokurudzira kuti iwe upfuure nepamutemo webhusaiti, VCMI Chirongwa
Havasi vese varipo asi ivo vese varipo
Iyo mitambo yemitambo yeGnu / Linux yakawanda. Iyi mitambo mishanu ndiyo inonyanya kufarirwa pachikuva asi pane zvakawanda zvatinogona kudhawunirodha kubva kumahofisi epamutemo echero kugoverwa kweGnu / Linux Kana iwe usina kuvaziva, ndinokurudzira edza iyi mitambo kamwe chete, kunyangwe chero ipi zvayo inogona kukuvimbisa maawa nemaawa ekunakidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » 5 mitambo yemitambo yatinogona kuisa pane ingangoita chero kugoverwa kweGnu / Linux